Ka Nkume gị nke kpakpando nwuo | Martech Zone
Sunday, December 4, 2011 Douglas Karr
Duke Long na-agba ọsọ a blog ezigbo ala na ụlọ blog na nso nso a gbara m ajụjụ ọnụ na ngosi ya site na Google+ Hangout. Isi okwu a bụ ihe dị mkpa… na ụlọ ọrụ ebe ndị ndu na-ejikwa, na-agbakọ, yana… ikekwe… na ụfọdụ egos, kedu ka ị mere akara ozi?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, gị akara ozi site na iwe ndị ziri ezi na ịhapụ ha ka ha mee ihe ha dị oke mma. Na azụmaahịa ụlọ, ikike ụlọ ọrụ na mmekọrịta azụmahịa nke ndị ọrụ na-etolite bụ isi ihe ịga nke ọma ha. Endinggbatị netwọk a na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe dị oke mkpa. Mee ka kpakpando gị na-enwu!
Nke a bụ mkparịta ụka… ụfọdụ na-ehi ụra iji hụ na anyị anaghị emejọ:
Ndị ụlọ ọrụ na-echegbu onwe ha na ọ bụrụ na a hụ onye ọrụ ka kpakpando, ha na-ahapụ njikwa ya n'ụzọ ụfọdụ. Mara ihe, gị mgbe niile hapụ njikwa. Ndị ahịa ghọtara na ndị mmadụ na-abata go ọkachasị ndị nwere ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị na kpakpando gị nwere ike ịhapụ were ha na netwọkụ, mee ihe ịchọrọ debe ha. Mana ọ bụrụ na ha laa, ha ga-aga ma ị gaghị ahapụ ha ka ha nwee akara twitter.
Ohere iji rite uru ma too site na ikwe ka kpakpando gị na-enwu na soshal midia karịrị ịtinye ndị ọrụ gị n'ime ụlọ ebe ha chere na ha enweghị njikwa ma ọ bụ ohere. Nke ahụ, tinyere ọnwụ nke ihe ọhụrụ, nkwukọrịta, na azụmaahịa ha nwere ike inweta site na mgbasa ozi ọha na eze bụ n'ezie ntụzi maka ọdachi.
Tags: ikikeụlọ ahịaahịa ịre ụlọkpakpando
Na-eduzi SEO akpaaka